Ankizikely avokoa ny efatra tamin’ireo namoy ny ainy ireo, izay zazalahy 11 taona, 7 taona sy 9 taona ary zazavavikely 9 taona. Niara-may kilan’ny afo niaraka tamin’izy ireo tao an-tranony ihany koa ny rain’izy ireo, izay 53 taona. Araka ny ampaham-bokatry ny fanadihadiana nataon’ny mpitandro filaminana dia niniana natao izao fandoroana ny trano fonenan’izy ireo izao, saingy mbola tsy fantatra ny antony. Nambaran’ny mpitsabo nandray an-tanana ireto lasibatra ireto kosa fa isan’ny nanafaingana ny fahamaizan’izy ireo ny tsy fahaizana miaro tena, raha sanatria misy hain-trano.
Efa nitrangana hain-trano niniana natao, nahalasibatra ankizikely tahaka izao ihany koa, tao amin’ny fokontany Ambalamanasy Toamasina. Raha tsiahivina dia tany amin’ny volana mey tany no nisehoan’ny loza. Tamin’izay indray dia zazalahikely mirahalahy 14 taona sy 12 taona no nijanona irery tao an-trano, raha lasa namonjy alim-bavaka ny ray aman-drenin’izy ireo. Ilay zazalahikely 12 taona no nahatsikaritra fa nisy nanipy afo tao ambonin’ny tafo ravinala, ary namofona solika ny afo rehefa niredareda. Afaka nitsoaka sy tafaporitsaka vetivety izy, saingy ilay zokiny 14 taona kosa dia efa nisy azon’ny afo kely ihany ny masony sy ny molony mbamin’ny tanany, vao voavonjin’ny mpamonjy voina.
Isan’ny mitarika haingana ny fahafatesan’ny ankizy iharan’izay fahamaizana ao an-tokantrano ny tsy fahaizana miaro tena. Torohevitra vitsivitsy tokony ampiharina sy ampianarina ny ankizy ireto, raha sendra misy fahamaizana ao an-trano :
- Tony sy milamina tsara foana, mba hahafahan’ny saina miasa faran’izay haingana.
- Miantso vonjy sy manaitra ny manodidina ary mamoaka haingana ny ankizikely, ny vehivavy, ny olona manana fahasembanana
- Ezahina vonoina ny foiben’ny herinaratra mba hisorohana ny fipoahana sy ny « court-circuit ».
- Mijanona eo ivelan’ny trano rehefa tafavoaka, mba hanomezana fanampim-panazavana ho an’ny mpamonjy voina
Raha sanatria tsy tafavoaka ao anaty trano may :
- Akatona ny varavarana misy ny foiben’ny afo, mba tsy hiparitahany.
- Tobasana rano ny varavarana
- Mitafy lamba lena ary miondrika amin’ny tany mba tsy ho sempotry ny setroka
- Tapenana lamba mando ny orona sy ny vava
- Raha mandeha na mifindra toerana dia mandady
- Tsy mandray herinaratra na fitaovana misy ifandraisana amin’ny herinaratra.